Kedu esi enweta ngwaahịa gị na Amazon - ngwa ngwa ma nọrọ jụụ?
A maara Amazon dị ka ụlọ ahịa na-ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ewu na ihe dịka nde 170 nde ndị nleta pụrụ iche emere atụmatụ kwa ọnwa. Ọ bụ ya mere ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere akwụkwọ novice ma chọọ ịma otu esi enweta ngwaahịa gị na Amazon - ị nọworị ebe kwesịrị ekwesị. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị obere ntụziaka site na ntụziaka maka ị ghọtara otu esi enweta ngwa ahịa gị ngwa ngwa na Amazon - ma malite ịmalite ịzụ ahịa ahịa nke ọma ozugbo. Ya mere, ka anyị banye n'ime isi ihe ndị ahụ.
Otu esi enweta ngwaahịa gị na Amazon
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka m gosi gị otu esi ere na Amazon. Ihe bụ na usoro nke ire ere n'ebe ahụ nwere ike ịdị mfe maọbụ dị ka ihe siri ike - naanị dabere na ụdị ngwaahịa, ụdị, ma ọ bụ ọtụtụ ị na-aga ịtọ dị ka ihe mgbakwunye maka iwu gị niile n'ọdịnihu.Ma, ebe a bụ ihe anọ ị ga-eme ka ọ dịrị gị mfe karịa, ọ dịkarịa ala ndị metụtara ịbịakọta ngwaahịa gị edepụtara na Amazon n'ụzọ ziri ezi:
1. Chọta ụdị onye na-ere ere - ọtụtụ, ọ dabere na otu ụdị azụmahịa ị na-agba ọsọ. N'izu, ị nwere ike ịmalite ire ere abụọ - ma ọ bụ dịka obere ndị na-ere ákwà (nyere gị nchịkwa ahịa gị kwa ụbọchị n'okpuru 40 ihe kwa ọnwa, ụgwọ ahịa ahịa nke mediocre agaghị efu gị karịa 1. 5 dollar kwa ihe na-ere n'ebe ahụ), ma ọ bụ na-amalite dị ka onye ahịa azụ site na mmalite (nyere na ahịa gị kwa ọnwa ga-agafe ihe iri anọ na-ere kwa ọnwa, ego gị kwa ọnwa ga-amalite na 40 ego tinyere ụfọdụ ụgwọ azụmahịa ọ bụla).
2. Wụpụta amaahịa Amazon nke gị na - ere ahịa - ọ pụtara na ị ga - enweta aha ụlọ ahịa gị na Amazon ka ị wee malite ịzụ ahịa ebe ahụ. Iji mezue akụkụ a nke ntọala akaụntụ, Amazon ga-arịọ gị ka ị jupụta data ndị a: Aha njirimara, Iwu Aha / Adreesị, Mbupu Mbupu, Ama Banyere Akaụntụ Banyere, Nkọwa Kpọtụrụ (ma Amazon n'onwe ya, na ndị ahịa gị n'ọdịnihu).
3. Mepụta na juputa profaịlụ gị onwe gị - nke a bụ mgbe ị ga-ahapụ onye ọ bụla na-azụ ahịa na Amazon ịmara ihe ụlọ ahịa gị na-ebubata na-emetụta (nke na-ere ahịa na ngwaahịa, ihe ngosi pụrụ iche gị dị ka onye Amazon, usoro na ọnọdụ nke nlọghachi / nkwụghachi ụgwọ).
4. Ugbu a ị maara otú e si enweta ngwaahịa gị na Amazon - oge eruola ịmalite ire na mbupu! N'ezie, akụkụ a dị irè nke usoro a bụkarị ihe kacha sie ike. Ọ pụtara na ị ga-agbatị mbọ ịchọta nyocha ọchụchọ ugboro atọ ma nọgide na-amụta otú ị ga-esi mee ka ọtụtụ n'ime ngwaahịa gị. N'ikpeazụ, iji mee ka ha reere gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ị ga-esi na-eme onwe gị Source .